DAAWO: DF Soomaaliya miyey ka dambeysay in ay Imaaraatka Carabtu ka baxaan Berbera.
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa la ogaaday in ay dadaal badan ku bixisay sidii ay u joojin lahayd arrimaha ku wajahan Saldhiga Milateri ee ay dawladda Imaaraatka Carabtu, ka sameysan lahayd magaalada Berbera ee Somaliland.
Ergada Joogtada ah ee Soomaaliya u joogta Qaramada Midowbay ayaa dadaal badan ku bixiyey sidii loo joojin lahaa Saldhigaas oo cadaadis loo saari lahaa dawladda Imaaraatka Carabta, ka dib markii ay wada hadalo gooni-gooni ah la yeesheen wakiilada dalalka Qaramada Midowbay.
Kulankii ugu dambeeyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbay ayaa ka dalbaday Imaaraatka in ay gabi ahaanba joojiyaan dhismeynta iyo talaabo kasta oo aysan raali ka aheyn dawladda Soomaaliya oo ay wali ka wadaan meelaha ay cabashada kasoo gudbisay.
Warbaahinta ayaa ogaatay in 8dii bishan September ay Khubaradii Imaaraatka ee gacanta ku heysay howlaha dhismaha madaarka Milateri ee Berbera ay dib ugu laabteen dalkooda Imaaraatka, waxaana talaabadaas ay ahayd mid ay soo dhaweysay dawladda Faderaalka.
Xukuumadda Muqdisho, waxay hadda dadaal ugu jirtaa sidii mashaariicda horumarineed ee Imaaraatku ka fulinayaan mandiqadaha Puntland iyo Somaliland ay u soo mari lahaayeen nidaamka sharciga ah ee dawladnimada dalka.
Mashaariicda Berbera iyo Boosaaso ee shirkada DP WORLD gacanta ku hayso ayaa la rumeysan yahay in ay uga baahan yihiin warqadda ogolaanshaha Madaxda dawladda Soomaaliya, laakiin ma jirto labada dekedood wax laga qabtay ilaa hadda, marka laga reebo in maamulkooda ay la wareegtay Xukuumadda Imaaraatka.
Dawladdaha barriga Afrika iyo dal Carbeed ayaa dadaal ka dhex wada Soomaaliya & Imaaraatka, sidii ay wadajir ugu kulmi lahaayeen, isla markaasna ay uga wada hadli lahaayeen xariirka labada dal ka dhaxeeya oo dhaawacyo waa weyn oo xagga siyaasiga ah ay soo gaareen sadexdii sanno ee lasoo dhaafay.